Toamasina-Fanapariahana vary lo : Orinasa pakistaney iray nakaton’ny “Task force” | NewsMada
Toamasina-Fanapariahana vary lo : Orinasa pakistaney iray nakaton’ny “Task force”
Nahitam-bokany sahady ny asan’ny “Task force”, manara-maso ny vary any Toamasina. Sahirana ihany anefa ity rafitra manokana ifandrombonan’ny rafitra maromaro ity satria misy ny kamiao sasany mitondra vary, toa avela handeha malalaka na tsy tomombana aza ny taratasiny, raha nosavain’ny “Task force”.
Araka ny efa nitaterana azy teto, miparitaka izay tsy izy ny vary maloto sy efa lo afangaro amin’ny vary madio ary mody amidy mora 2.000 Ar ny kilao. Nihetsika ny “Task force” nanara-maso ny vidim-bary sy ny fitantanana azy ary tonga hatrany amin’ny mpanijara. Tra-tehaka tetsy Tanamborozano tao anaty trano fitahirizana an’ny teratany pakistaney iray, ny vary maloto sady lo miisa 2.310 kitapo amin’ny 50 kilao.
Nambaran’ny talem-paritry ny Varotra sy fanjifana, Lambo Nadia, fa heloka roa samy hafa ny hanenjehana azy, ny fanapariahana vary maloto sady simba sy halatra lanja. Satria tsy ampy lanja ny vary amidin’izy ireo, milanja 49 kilao sy 200 grama.
Anisan’ny mpikambana ao anatin’ny “Task force” ny mpitandro filaminana. Nilaza ny kolonely Ralaikoa Tianarivo Gabriel, fa hosokafana avy hatrany, nanomboka omaly, ny famotorana ary hatolotra ny fampanoavana ilay Pakistaney. Ny fitsarana ny manapaka raha ho tazonina am-ponja vonjimaika izy na hampodiana any amin’ny firenena niaviany.
Tsikaritra fa tsy afaka miasa tsara ity “Task force “ity ary azo heverina ho toy ny mampiditra mamoaka ihany ny fanjakana. Hanamarinana izany, nahasakana kamiao sivy nitondra vary “stock” izy ireo, ny tolakandron’ny alarobia 6 desambra teo, tamin’ny lalam-pirenena faharoa (RN 2). Nisy tsy tomombana ny antontan-taratasy tany amin’izy ireo, ka nokasain’ny “Task force” haverina any Toamasina. Tsy izany ny nitranga, fa nisy antso an-telefaonina avy amin’ny fianakavian’ny tompon’andraikitra, nilaza ny tsy hanagiazana ary hamelana malalaka ireo kamiao hiakatra any Antananarivo.
Fantatra fa novidina 74.000 Ar ny iray kitapo (1.480 Ar ny kilao) fa tsy fantatra kosa ny hivarotana azy avy eo. Izany hoe, tsy ho azo antoka ny hivarotana ho 1.500 Ar ny kilao raha ny toro-mariky ny fanjakana tokony hividianan’ny mpanjifa azy.